Isinxibo sendabuko sesiGrike | Ukuhamba kwe-Absolut
Isinxibo sendabuko sesiGrike
Mhlawumbi le yenye yeengubo esizichonge kakhulu eGrisi. Akunakwenzeka ukuba ulahlekelwe yilezo zihlangu ezintle, akunjalo? Isuti epheleleyo ibizwa ngokuba i-foustanella kwaye yayiqhele ukunxitywa ngamajoni noonozakuzaku ngoko kwabhengezwa njenge isinxibo sesizwe samadoda.
Ihlala ibonakala kwiindawo ezineentaba zaseGrisi, embindini nakumazantsi eli lizwe, kwaye ifumana igama layo kwisiketi esimhlophe esimhlophe, i-fountanella, eyenziwe ngelaphu elingunxantathu elibizwa ngokuba yi-langolia, kwaye ithungwe idiagonally. Esi siketi sinezibongozo ezingama-400 kwaye bamele iminyaka apho iGrisi yayiphantsi kolawulo lwe-Ottoman. Uhlaziyo lwamaGrike lwango-1821 lwenziwa ngamadoda ayenxibe ngolo hlobo, amadoda akhaliphileyo awayesilwa nabantu baseTurkey, kunye neyunifomu esemthethweni yabalindi bakamongameli, iEvzones.
Namhlanje isiketi esimhlophe sikhatshwa yingubo efekethisiweyo ebizwa ngokuba yi "fermeli" enokuba luhlaza okwesibhakabhaka, mdaka okanye mnyama. Umbala onsundu ngulowo unxitywa ngumphathi wabalindi. Unxiba umbhinqo esinqeni kunye nezihlangu zepompo, iipompo ezinkulu, ezibizwa ngokuba yitsarouhia, ezazisetyenziselwa ukunyuka iintaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Isinxibo sendabuko sesiGrike
Kunzima kangakanani ukufumana eli phepha ndiyathemba ukuba unokubona isinxibo esiqhelekileyo somfazi
Esque ndenza umsebenzi wendabuko yesinxibo samaGrike, kwaye kufuneka yenzelwe indoda nomfazi kodwa kunjalo, eli phepha lihle kakhulu, ndenza ntoni?
Imbali emfutshane yase-Austria